Stayhome ကာလမှာ ဝါသနာပါရာလေးလုပ်ဖြစ်နေရင်း သမီးလေးသုသုရဲ့ ပုံတူလေးကို လက်စွမ်းပြဆွဲခဲ့တဲ့ အိနြ္ဒာကျော်ဇင် – ShwePyiAye
Stayhome ကာလမှာ ဝါသနာပါရာလေးလုပ်ဖြစ်နေရင်း သမီးလေးသုသုရဲ့ ပုံတူလေးကို လက်စွမ်းပြဆွဲခဲ့တဲ့ အိနြ္ဒာကျော်ဇင်
Stayhome ကာလမှာ ဝါသနာပါရာလေးလုပ်ဖြစ်နေရင်း သမီးလေးသုသုရဲ့ ပုံတူလေးကို လက်စွမ်းပြဆွဲခဲ့တဲ့ အိနြ္ဒာကျော်ဇင် အနုပညာမျိုးရိုးကောင်းကောင်းရှိတဲ့ အိနြ္ဒာကျော်ဇင်က သူမကိုယ်တိုင်လည်း မိသားစုထဲမှာ ထူးချွန်သူတစ်ယောက်ပါပဲ။ အိနြ္ဒာကျော်ဇင်က သရုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာ ထူးချွန်သူမို့ အကယ်ဒမီဆုတွေလည်း ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားသလို အခြားသော အနုပညာနဲ့ပက်သတ်တဲ့့ပညာတွေကို လေ့လာသင်ယူနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက ပန်းချီဝါသနာပါသူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အိနြ္ဒာကျော်ဇင်က အခုလို ရှုတင်တွေမရှိတဲ့အချိန်မှာ သူမဝါသနာပါရာ ပန်းချီဆွဲခြင်းနဲ့အချိန်ကုန်ဆုံးဖြစ်နေကြောင်း အခုလိုပဲ ပြောပြထားပါတယ်။ “Stayhome ကာလမှာ ဝါသနာပါရာလေးလုပ်ဖြစ်နေတဲ့ မတ်မတ်အူဝဲ။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ပုံလေးတွေ တွေ့ရင်၊ ရှုခင်းလေးတွေတွေ့ရင် ရိုက်ပြီးသိမ်းသိမ်းထားတတ်တယ်။ ပြီးရင် ပန်းချီပြန်ရေးဖို့အတွက်။ ခုရေးထားတဲ့ ပန်းချီလေး တစ်ချို့ကို ပရိသတ်တွက် အမှတ်တရတင်ပေးလိုက်တယ်နော်။ အူဝဲရဲ့ လက်ရာကိုတော့ မရီနဲ့နော်။ ကြိုးစားဆဲသူမို့။ မယ်သုပုံလေး ပုံတူရေးကြည့်တာ, မယ်သုကတော့ အားပေးတယ် အမေကို မတူဘူးချည်းပဲ ပြောတာ…. 🤣🤣🤣” ဆိုပြီး သူမရဲ့ လက်ရာ ပန်းချီပုံလေးတွေကို ဗီဒီယိုလေးနဲ့ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အခုလို မျှဝေထားပါတယ်။
အိနြ္ဒာကျော်ဇင်ကတော့ ပန်းချီဆွဲတာကို ငယ်ငယ်ကတည်းက သင်ယူထားတဲ့အပြင် မြန်မာ့ရိုးရာ စောင်းပညာကိုလည်း တစ်ဖတ်ကမ်းခတ် သင်ယူထားသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ပညာရှင်တစ်ယောက်မဟုတ်ပေမယ့် ဝါသနာရှင်အဆင့်ထက်ပိုတဲ့ အိနြ္ဒာကျော်ဇင်ရဲ့ ပန်းချီလက်ရာလေးတွေကို သဘောကျကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။
Source: Eaindra Kyaw Zin’ s fb
Stayhome ကာလမွာ ဝါသနာပါရာေလးလုပ္ျဖစ္ေနရင္း သမီးေလးသုသုရဲ႕ ပုံတူေလးကို လက္စြမ္းျပဆြဲခဲ့တဲ့ အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ အႏုပညာမ်ိဳး႐ိုးေကာင္းေကာင္းရွိတဲ့ အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္က သူမကိုယ္တိုင္လည္း မိသားစုထဲမွာ ထူးခြၽန္သူတစ္ေယာက္ပါပဲ။ အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္က သ႐ုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ ထူးခြၽန္သူမို႔ အကယ္ဒမီဆုေတြလည္း ရရွိပိုင္ဆိုင္ထားသလို အျခားေသာ အႏုပညာနဲ႔ပက္သတ္တဲ့့ပညာေတြကို ေလ့လာသင္ယူေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ငယ္ငယ္ကတည္းက ပန္းခ်ီဝါသနာပါသူတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္က အခုလို ရႈတင္ေတြမရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ သူမဝါသနာပါရာ ပန္းခ်ီဆြဲျခင္းနဲ႔အခ်ိန္ကုန္ဆုံးျဖစ္ေနေၾကာင္း အခုလိုပဲ ေျပာျပထားပါတယ္။
“Stayhome ကာလမွာ ဝါသနာပါရာေလးလုပ္ျဖစ္ေနတဲ့ မတ္မတ္အူဝဲ။ ကိုယ္ႀကိဳက္တဲ့ ပုံေလးေတြ ေတြ႕ရင္၊ ရႈခင္းေလးေတြေတြ႕ရင္ ႐ိုက္ၿပီးသိမ္းသိမ္းထားတတ္တယ္။ ၿပီးရင္ ပန္းခ်ီျပန္ေရးဖို႔အတြက္။ ခုေရးထားတဲ့ ပန္းခ်ီေလး တစ္ခ်ိဳ႕ကို ပရိသတ္တြက္ အမွတ္တရတင္ေပးလိုက္တယ္ေနာ္။ အူဝဲရဲ႕ လက္ရာကိုေတာ့ မရီနဲ႔ေနာ္။ ႀကိဳးစားဆဲသူမို႔။ မယ္သုပုံေလး ပုံတူေရးၾကည့္တာ, မယ္သုကေတာ့ အားေပးတယ္ အေမကို မတူဘူးခ်ည္းပဲ ေျပာတာ…. 🤣🤣🤣” ဆိုၿပီး သူမရဲ႕ လက္ရာ ပန္းခ်ီပုံေလးေတြကို ဗီဒီယိုေလးနဲ႔ တစ္စုတစ္စည္းတည္း အခုလို မွ်ေဝထားပါတယ္။
အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ကေတာ့ ပန္းခ်ီဆြဲတာကို ငယ္ငယ္ကတည္းက သင္ယူထားတဲ့အျပင္ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ေစာင္းပညာကိုလည္း တစ္ဖတ္ကမ္းခတ္ သင္ယူထားသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ႀကီးလည္း ပညာရွင္တစ္ေယာက္မဟုတ္ေပမယ့္ ဝါသနာရွင္အဆင့္ထက္ပိုတဲ့ အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ရဲ႕ ပန္းခ်ီလက္ရာေလးေတြကို သေဘာက်ၾကမယ္ ထင္ပါတယ္ေနာ္။
Previous post ကိုယ့်ကို တန်ဖိုးမထားတဲ့ သူတွေနဲ့ မဆုံချင်ဘူးလို့ ခံစားချက်တွေကို ရင်ဖွင့်ပေါက်ကွဲနေတဲ့ G-FATT
Next post သူမရဲ့ သက်စေ့ အလောင်း (28) လောင်းကျော်ရဲ့ ဘဝ​နေဝင်ချိန်များကို အေးချမ်းစွာ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကို မျှဝေလေိုက်တဲ့ ရွှေပိုးအိမ်